Charlotte Mannya Maxeke – The Ulwazi Programme
Kuningi intsha emnyama yaseNingizimu Afrika edlule kukho ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo, isikhathi ebesinzima kuthina ngoba phela besilwa nengcindezelo. Okubi ukuthi abantu abamnyama bahlupheke baphinde bahlukumezeka kakhulu phambilini kanti namanje kusaqhubeka lokho noma ukucindazelwa sekwaphela kodwa abantu abansundu basacindezekile ngokwemisebenzi nobubha. Kuleli khasi kuyinyanga yentsha sithi ake sibhunge ngomama uCharlotte Makgomo Maxeke. UCharlotte ngumama odume kakhulu emlandweni … Read more
Unyaka nonyaka uhulumeni wethula isiqubulo esisuke sizoba isiqubulo sezinhlaka zikahulumeni. Leziqubulo zihambisana nezinhlelo zakhe uhulumeni kanti ke leziqubulo zihambisana nokukhunjulwa kwamaqhawe abambe iqhaza emlandweni waseNingizimu Afrika. Kulonyaka isiqubulo esithi “The year of Charlotte Mannya Maxeke: Growing youth employment for an inclusive and transformed society”. Lokhu kuqondene kahle ngoba entsheni abantu abafana naye umama uCharlotte bangabantu … Read more
Categories History, People Tags Charlotte Mannya Maxeke, Charlotte Maxeke